April 16, 2021 - Cele Fans
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကို အချိန်တိုအတွင်း ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရသစ် ပြော
April 16, 2021 Cele Fans 0
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ဟာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးတွေ အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၁၅ ဦးပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကို ဒီကနေ့ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသစ် NUG မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒုသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၊ အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန် ခေါ် စာရေးဆရာ မောင်တင်သစ်၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး […]
နှစ်ဆန်း (၁)ရက်နေ့ ထစ်ချုန်းမိုး၊မိုးသည်းနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ လျှပ်စီးမိုးချုန်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်
17.4.2021 …. မနက်ဖြန်မြန်မာနှစ်ဆန်း (၁)ရက်နေ့။မနက်အစောပိုင်းနှင့် မနက်ပိုင်းမှာ . မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ထစ်ချုန်းမိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ 🌧🌧🌧🌧🌧🌧 ပဲခူးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း အောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့……ဝေါ၊ သိမ်ဇရပ်၊ မုပ္ပလင်၊ ကျိုက်ထို၊ သနပ်ပင်၊ သက္ကလ၊ ကဝ၊ ခရမ်း၊ သုံးခွ၊ သန်လျင်မြို့၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲ၊ ကျောက်တန်းမြို့တို့မှာ ထစ်ချုန်းမိုးများ ရွာနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့က အနည်းငယ်မျှ ရွာနိုင်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်……⛈⛈⛈⛈⛈တောင်ကုတ်၊ ရမ်းဗြဲကျွန်း၊ မာန်အောင်ကျွန်း၊ရဲကျွန်းတို့မှာထစ်ချုန်းမိုး။ ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ 🌧🌧🌧🌧🌧🌧ဘားအံမြို့ ထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပြီးကမမောင်းနှင့် […]
ဒီကေန႔ ဧၿပီလ (၁၆)ရက္မွာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕မွာ မအိသဥၨာေမာင္ကို အမ်ိဳးသမီး၊လူငယ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္တာပါ။ မအိသဥၨာေမာင္ဟာ နိုင္ငံေရးတက္ႂကြလွုပ္ရွားသူ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ လူငယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ❣️❣️❣️ Credit Photo ————— ဒီကနေ့ ဧပြီလ (၁၆)ရက်မှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှာ မအိသဉ္ဇာမောင်ကို အမျိုးသမီး၊လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တာပါ။ မအိသဉ္ဇာမောင်ဟာ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သပိတ်ခေါင်းဆောင် လူငယ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ❣️❣️❣️ […]
အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို လ ဖုံးကြယ္မည့္ျဖစ္စဥ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမင္ရမည္
လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၇) ရက် (မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့) မှာတော့ အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ အာကာသဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ် (မားစ်) ကို လမင်း (တန်ခူးလဆန်းလ) မှ ဖုံးကွယ်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် လ ကို ဂြိုဟ်/ (ကြယ်) ဖောက်ခြင်း လို့လည်း ဆိုနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ အနီရောင်အဆင်းရှိပါတယ်။ […]
ထိုင်းထီ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန်
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ထိုင်းထီတိုက်ရိိုက် live လာပြီ။ တစ်လမှာ နှစ်ခါကံစမ်းခွင့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးမို့ လက်မလွှတ်တမ်း ထိုးထားကြမယ်လိို့ ထင်ပါတယ်။ ထီကတော့ထိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ထိုးလို့ပေါက်ရင် လှူနိုင်မှာပါနော်။ ဆန္ဒတွေဖြစ်မြောက်လာဖို့ အလှူရှင်တွေလိုအပ်နေချိန်မှာ ခင်ဗျားသာထီပေါက်လို့ကတော့ တကယ်ကုသိုလ်ရမယ့် အခွင့်အရေးကြီးနော်။ အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ ————– အားလုံးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ ထိုင္းထီတိုက္ရိိုက္ live လာၿပီ။ တစ္လမွာ ႏွစ္ခါကံစမ္းခြင့္ရတဲ့ အခြင့္အေရးမို႔ လက္မလႊတ္တမ္း ထိုးထားၾကမယ္လိို႔ ထင္ပါတယ္။ ထီကေတာ့ထိုးထားသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ထိုးလို႔ေပါက္ရင္ လႉႏိုင္မွာပါေနာ္။ […]